Yenziwe ngaphakathi Chngaphakathia: Intoni yi happenngaphakathig? - Shenzhen Xiangfu Precyiion Umzi mveliso Co, Ltd
Ikhaya > Iindaba > Umzi mveliso Iindaba
Yenziwe ngaphakathi Chngaphakathia: Intoni yi happenngaphakathig?
Kwihlabathi lanamhlanje, ukhuphiswano lwemveliso entsha sele luqalisiwe: I-United States ifuna ukuba kubuyelwe imveliso ephezulu, kwaye iJamani igxile ekwakheni i-4.0. Njengelizwe lemveliso, iChina isungule inyathelo "elenziwe e China 2025" ...
Utshintsho yinto entsha yokuyenza: i-Intanethi ephathekayo kwimodeli yeshishini yokuguqukela kwaye kwangaxeshanye, iyatshintsha kwaye ikwimo yokuguqula izinto, amathuba amakhulu kunye nemingcipheko yokukuqulatha.
Iintatheli ziziva zikumatshini we-shenyang isixhobo sophando lweqela, khawulezisa isantya kuphela sokuphucula iziko kunye nolutsha ukuqhuba, ukuthatha amathuba kolu khuphiswano, uphephe umngcipheko, ukudibanisa nokwandisa okwenziwe e-China kwicandelo lokhetho lwabasebenzi kwilizwe liphela isikhundla esiphambili.
Hlula amacala amabini
Intengiso yezixhobo zomatshini waseTshayina iphantsi kolawulo olutsha. I-Adantants ku-zhejiang cixi isixhobo sombane se-co. inyanga, kunye namazwe asempuma mpuma aseAsia anjengeVietnam imivuzo yabasebenzi yi-700 ye-yuan ukuya kwi-800 ye-yuan. Isixhobo esiphakathi somatshini asichanekanga ngokwaneleyo, kwaye iindleko zabasebenzi ziyenyuka, "akukho lutshintsho kwiminyaka emihlanu, kwaye abasebenzi kunye nam kuya kufuneka sigoduke!"
Ingxaki, iRongYiQun ikhethe umatshini okrelekrele: "Umatshini okrelekrele, ukusebenza ngokulula, ukuchaneka okuphezulu, umsebenzi unokusebenzisa izixhobo zomatshini, ii-4 ngomatshini ngeyure yeendleko zabasebenzi ziye kuthi ga kwi-4 yeedola, abasebenzi bawa malunga ne-900 yuan ngenyanga."
Izixhobo zoomatshini abaqhelekileyo basekhaya azizinzileyo, kwaye ukungeniswa kwezixhobo zomatshini wokuphela kwe-CNC ephezulu, ngakumbi ezo zixhobo eziphakamileyo zoomatshini be-CNC phesheya, kukhuphuke kabukhali. Kwishishini lezixhobo zomatshini we-shenyang, umzekelo, ngo-2014 umatshini oqhelekileyo wokurhweba ngokuthengisa ukusuka kowama-250 ngo-2011 ukuya kumatshini omalunga nama-50, ukuqhuba ngemitha, ukusuka kwi-2000 ukuya kwengama-200.
Ilitha enye kunye nethonthi kubonakalisa ubunzima obujamelana neChina.
Imveliso yeli lizwe jikelele yokhuphiswano lwangaphambili, amazwe asentshona athathela ingqalelo iingxaki ezifana nokusetyenziswa kwezixhobo kunye neendleko zabasebenzi, uphando kunye noyilo lwasekhaya, edlulisela ikhonkco lokuvelisa ngaphandle. Kumjikelo omtsha wokhuphiswano, amazwe aphuhlileyo aqala ukukhawulezisa ukumiliselwa kokubuyela kwecebo elitsha lendawo, ukuxhomekeka kwirobhothi ekrelekrele + 3 d yokuprinta isixhobo sokutshintsha komatshini izixhobo, izixhobo kunye nezithintelo zeendleko zabasebenzi.
"IU.S. r & d, imveliso yase U.S. Ingcali echaphazelekayo icinga ukuba, isuka kwi-Chinese academy yobunjineli kumjikelo omtsha woguquko lwetekhnoloji kunye nohlaziyo lomzi mveliso, uphuhliso lomzi mveliso wase China lujongile emva kokufumana ithuba kumazwe aphuhlileyo kunye noqoqosho oluhlumayo lukhuphisana.
Imveliso eTshayina ihamba noluhlu lweemvavanyo ezintsha: ukunyuka kweendleko zabasebenzi kunye nokuncipha kwenani labantu abasebenzayo; Amanani aphantsi kwaye inani elikhulu leenkampani eziselwayo lisengozini yokupheliswa. Itekhnoloji ephambili kudala yaphantsi kolawulo lwabantu ...
"Ukukhula koluntu noqoqosho kuhlalutyo lokugqibela kuxhomekeke kwimveliso. Ukwahlula le meko uyixhasileyo, kubalulekile ukomeleza inkxaso yobuchule bokwenza imveliso, ukukhawulezisa ubugcisa kunye nobukrelekrele, ukwazisa, ukubamba omnye umjikelo wamathuba oguquko lwemveliso." U-Linayo, umlawuli we-Chinese academy yesayensi e-shenyang, utshilo.
"Ukujikeleza imeko yezezimali yehlabathi ngo-2008, uqoqosho lwehlabathi, eyona nto iphambili ayifumaneki inkxaso eyomeleleyo kumzi-mveliso. Ukuphela kwemveliso ephezulu, ekugqibeleni kuya kuba kuqoqosho lwehlabathi ngaphandle komthunzi wengxaki yemali yezizwe ngezizwe, inkxaso ebalulekileyo elandelayo Umjikelo woqoqosho oluqhubayo, olungumzi mveliso wase China ukukhawulezisa ukuguqulwa kwentsingiselo. "
IsiJamani abathengi ukuba tyelelo xiangfu I-CNC facukubary ze uhlolo kwaye isikhokelo